Fanakanana ny Lahatsary Bubble Gum (Siligaoma) ary i Singapaoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2018 4:36 GMT
Nifandray tamin'ny Tomorrow.sg, ilay metablaogin'i Singapaoro ny lahatsary iray nitondra ny lohateny hoe ”Bubble, Bubble, Toil and Trouble” novokarin'i Nicholas Carlton. Novokarina tao Singapaoro ary maneho ny fanakanan'i Singapaoro ny lahatsary Bubble Gum ny ampahany amin'ilay lahatsary.
Tsy faly amin'ny ohatra nampiasain'ilay mpamokatra sarimihetsika ny Singaporeana sasany. Fanehoankevitra iray ao amin'ny pejy Youtube.
Faly aho fa madio ny fireneko noho ity raha oharina amin'ireo firenena hafa ary zavatra tsy dia raharahianay izany fa ilainay…na izany aza, mamela anay hitondra isanà siligaoma kely avy amin'ny firenena hafa ny lalàna ankehitriny raha tianay izany… noho izany, tsy hoe voarara tsy hikitika siligaoma mihitsy ireo Singaporeana… ary afaka mividy izany any amin'ny fivarotam-panafody tsy mila fanazavana ianao… noho izany, maninona no tsy firenena hafa no alainao ho ohatra?
Amin'ny fotoana iray ao amin'ilay lahatsary, mampiasa efijery mizara roa ilay mpamokatra sarimihetsika mba hampitahàna ny làlana iray ao Melbourne amin'ny iray hafa ao Singapaoro. Toa maloto kokoa ny làlana ao Melbourne noho ireo siligaoma avy notsakoina mipetaka any amin'ny toerana maro.
Milaza ny fanehoankevitra iray tsy fanta-mpanoratra ao amin'ny Tomorrow.sg
Toa tsy mitranga any amin'ny toerana hafa ilay tantara ho an'i Melbourne, toa an'i Sydney, na ny tanàn'i Fremantla, izay ny fahitako azy, dia nadio, tsy nisy siligaoma.
Mihevitra aho fa samihafa isaky ny faritra manerana izao tontolo izao ny fihetsika amin'ny fandraisana andraikitra sosialy; somary ohatra ilay fiantraikany hoe ”mifampiana-dratsy toy ny rajako”
Mamaly i Joy
Mihevitra aho fa marina ny lazain'i ‘tsy fantatra anarana’ mikasika ny hoe tranga hafa amin'ny resaka fandraisana andraikitra ara-tsosialy izany. Mety ho teboka iray fanafihana tsaratsara kokoa izany. Tsy misy fandraràna ny siligaoma ao Japana kanefa mbola madio noho i Singapaoro izy. Saingy heveriko fa mora kokoa noho ny mamboly kolotsaina ny famolavolana lalàna….raha izany… rarao any!
Manamarika ny mpampiasa tsy fantatra anarana iray hafa
Mila mifandaja amin'ny fahalalahana ara-tsosialy ny fahalalahana manokan'ny tena. Ny mariky ny olona goavana iray dia ny fahafahany mampifanaraka fomba fijery maro isankarazany, noho izany, angamba izay marika iray ahafahany mandingana ny tsipika manasaraka azy roa ireo no mariky ny fiarahamonina lehibe iray.
Manazava ao amin'ilay pejy Youtube ilay mpamokatra sarimihetsika fa toy ny sary fanehoana no ampiasàny ny Fanakanan'i Singapaoro ny Siligaoma.
Tsy ny siligaoma no resahan'ity sarimihetsika ity. Mampiasa izany toy ny ohatra iray fotsiny ahafahan'ny olona mamaritra ny tenany io. Fandinihana momba ny tranga iray ahafahana manadihady ny fanarahamaso ataon'ny fanjakana io.
Hita fa (avy amin'ilay rohin'ny fitantarana ao amin'ilay lahatsary) fa toa miresaka momba ny fanjakana amin'ny ankapobeny fa tsy i Singapaoro irery ihany ilay mpamokatra sarimihetsika. Manontany izy
Raha toa ka manomboka amin'ny siligaoma izany dia aiza no hijanona? Rehefa milavo lefona mamela ny fahalalahana kely mba ananantsika isika mba hitazonana ny fiarandalamby ho madio dia midika ve fa milavo lefona tsy hanana ny zontsika ho afaka handray fanaoahankevitra antsika manokana? Raha toa ka tsy afaky ny mahatoky antsika amin'ny fitsakoana siligaoma ny fanjakantsika, inona no fanapahankevitra raisin-dry zareo any an-damosintsika any?